Hadii aad waligaa lumay wax ka mid ah xogta adiga oo aan ikhtiyaarka ah waxaa dib u helida aad shaki ku jirin in ay fahmaan muhiimadda haysashada gurmad ah. Waxaa si siman u muhim ah in ay helaan gurmad ah mar kasta oo aad u baahan tahay in si aad yeelan karaan ikhtiyaarka in la soo celiyo files waa in aad weligood lumin.
Wixii macruufka 9 users waxaa jira laba siyaabood oo loo files gurmad ah oo ku saabsan qalabka ay. Waxay ka mid yihiin;
1. Lugood macruufka 9 kaabta
Lugood waa mid ka mid ah hababka ugu caansan in dadka gurmad ay macruufka 9 qalabka. Waxaa jira faa'iidooyin dhowr ah oo la isticmaalayo Lugood badan hab kale oo wax. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka kuwani waa;
• aad gurmad Lugood si buuxda loo leeyahay oo aadan u baahan tahay in ay ku tiirsan yihiin adeeg kasta qayb ka mid saddexaad si ay u helaan ama faylasha xitaa gurmad aad u Lugood
• Waxaad sidoo kale uma baahnid in aad bixiso kaydinta haddii aad leedahay files waaweyn sida marka ay la adeegyo kale oo gurmad ah sida iCloud oo kaliya aad u ogolaanaya in ay ku koobnayn meel free
• Ma u baahan tahay internet ama Wi-Fi xiriir ah uu u shaqeeyo
Iyadoo Lugood aadan si kastaba ha ahaatee waxay leeyihiin computer ah in ay leedahay oo lagu xiro qalabka macruufka ah in computer si ay u abuuraan gurmad ah.
2. iCloud macruufka 9 kaabta
la iCloud qalab macruufka 9 waxaa si toos ah xoojiyaa. Waa wax fudud aad u ma tan in aad xusuusan kor u taagaysa gurmad ah. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka kale ee iCloud ka badan fursadaha kale ee gurmad yihiin;
• Waa mid aad u fudud tan iyo markii ay inta badan waa automatic
• Waxaad dooran kartaa in gurmad wirelessly ama si toos ah
• Uma baahnid inaad computer ah si ay u abuuraan gurmad ah; kaliya waxaad samayn kartaa mid ka mid ah iyadoo la isticmaalayo qalab aad
hayaan iCloud ma Si kastaba ha ahaatee waxaa ka mid ah files warbaahinta in aan la iibsaday dukaanka Lugood iyo kaliya waxaad meel 5GB lacag la'aan ah.
Sidee si ay u helaan macruufka 9 gurmad content
Mararka qaarkood waxaad u baahan tahay in yar oo ka mid ah caawimaad si ku eegaan iyo dib u soo ceshano files ka Lugood ama iCloud gurmad. Tani gaar ahaan waa run marka aad rabto in aad soo celin xog gaar ah oo ka file ah oo gurmad ah sida soo horjeeda oo dhan file gurmad.
Xalka wanaagsan soo bixin waa Wondershare Dr Fone ee macruufka . Waxaa la soo magacaabay 1aad iPhone iyo iPad Data software soo kabashada aduunka. Halkan waa dhowr ka mid faa'iidooyin badan oo aad ka heli kartid software this;
Wondershare Dr Fone ee macruufka
• Waxay kuu ogolaanaysaa inaad hesho dib xogta tirtiray aad ka mid yihiin fariimaha, sawiro, xiriirada, videos oo dheeraad ah oo ka soo macruufka aad 9 qalabka
• Waxa aad u fududahay in la isticmaalo. Geedi socodka dhan qaadataa dhawr daqiiqo
• Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si fudud u soo ceshano xogta lumay ka qalab jabay, qalab ah oo uu soo shil nidaam soo celiyay in goobaha warshad laga badiyay xogta
• Iyada oo software waxa aad ku eegaan karo dooro xogta gaarka ah oo aad jeclaan lahayd in la soo celiyo
• Waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa si uu u xaliyo nidaamka qalliinka ee qalabka macruufka
Sidee Macdan iyo Xiisaha Leh Lugood gurmad raalli Wondershare Dr Fone
Burcad Wondershare Dr Fone on your computer ka dibna dooro "kabsado Lugood file kaabta." Dhammaan hayaan ee aad leedahay lagu soo bandhigi doonaa suuqa kala sababtay meesha aad mid aad rabto in aad ku salaysan taariikhda dooran kartaa.
Guji "Start Scan" markii aad leedahay doorato faylka ay ku jiraan macluumaadka aad rabto in aad soo kabsado. Waxay qaadataa waqti.
Dhamaan xogta lagu soo bandhigi doonaa qaybaha oo aad ku eegaan kartaa file in aad rabto iyo guji "Ladnaansho" badhanka hoose ee suuqa kala. Dooro kuwa aad rabto in aad soo kabsado sax ku sameeyo sanduuqa ku xiga si ay file kasta. Dooro hadii aad rabto in aad soo kabsado si computer ama qalab.
Sida loo soo dejisan iyo Falanqeynta iCloud content ee kaabta la Wondershare Dr Fone
Inaad doorato "kabsado iCloud files ee kaabta" marka aad ordi Wondershare Dr Fone. Waxaad ku qortaa account iCloud iyo password inay gasho in aad xisaabta.
Marka aad qortey galay iCloud oo dhan iCloud files gurmad in aad xisaabta, waxay noqon doontaa soo bandhigay. Ka mid ah meesha aad ku socoto inuu ka soo kabsado xogta ka dibna riix "Download" Dooro
Daaqadda gujisid muuqata ka, dooran files in aad rabto in aad ka soo dejisan iyo sawirka content iCloud ah. Guji "scan"
Marka scan la dhammeeyo, waxaad ku eegaan karaan dhammaan waxyaabaha ku jira in iCloud gurmad file. Dooro xogta aad rabto in aad soo kabsado sax ku sameeyo sanduuqa ka dibna riix "Ladnaansho"
Xogtaada u soo baxo in ay ama computer ka mid ah qalab aad adiga.
> Resource > Ladnaansho > Sidee si ay u helaan macruufka 9 ee kaabta faylasha